Muvhuro 27 Zvita 2021
Tote Bhegi Topographic yakafuridzirwa dhizaini tote bhegi, kushanda seyakareruka kutakura, kunyanya panguva idzo dzakabatikana mazuva akapedza kutenga kana kumhanya mafambiro. Iyo Tote bag kukwanisa kunge gomo uye inogona kubata kana kutakura zvinhu zvakawanda. Iro chirevo chepfupa ndechechimiro chechikwama chose, iyo yepamusoro mepu fomu yekumusoro segomo risina kufanana.
Svondo 26 Zvita 2021
Pendant Taq Kasra, zvinoreva kasra arch, ndiyo memento yeThe Sasani Kingdom iyo zvino iri muIraq. Iyi pendant yakafuridzirwa neiyo geometry yeTaq kasra uye hukuru hwevaimbova madzishe aive muchimiro chavo uye subjectivism, yakashandiswa mune iyi yekugadzira nzira kugadzira iyi ethos. Unhu hwakakosha ndehwokugadzirwa kwemazuva ano icho chakaita kuti ive chidimbu nemaonero akasarudzika kuitira kuti iite chimiro cheparutivi iyo inotaridzika senge tunaki uye inounza subjectivism uye iite chimiro chemberi yekuona iyo yavakaita nzvimbo yeaya.
Mugovera 25 Zvita 2021
Womenswear Muunganidzi Muunganidzwa uyu, Yina Hwang akafuridzirwa zvakanyanya nemadimikira ayo ari musimboti uye asymmetric achibata pasi petsika mimhanzi tsika. Akakunda muunganidzwa uyu zvichienderana nenguva yake yepamoyo yekumbundirwa kuti agadzire hembe dzeanoshanda asi dzaisabudika uye zvimwe zvinhu kuti zvivemo nenyaya yake yekuziva. Chero kupurinda nemachira ari muchirongwa chiri chepakutanga uye ainyanya kushandisa PU dehwe, Satin, Power Mash, uye Spandex kune hwakatangira machira.
Mutsipa Nemhete Dzakaiswa
Chishanu 24 Zvita 2021
Mutsipa Nemhete Dzakaiswa Oceanic mafungu pamutsipa chidimbu chakanaka chezvishongedzo zvazvino. Iko kusimba kwekusimba kwegungwa. Ukuru, hutano nekuchena ndizvo zvinhu zvakakosha zvinofungidzirwa muhuro. Mugadziri akashandisa chiyero chakanaka chebhuruu nemuchena kuratidza chiratidzo chemasaisai egungwa. Iyo yakagadzirwa nemaoko mune 18K chena goridhe uye yakasungirirwa nemadhaimani uye bhuruu safira. Mutsipa wacho wakakura chaizvo asi hauna kusimba. Yakagadzirirwa kuenderana nemhando dzese dzehupfeko, asi inokodzera kunyanya kuvezwa nependi iyo iyo iyo isingazopindiki.
China 23 Zvita 2021
Rakadhindwa Machira Ruva rinosvava ndeyekupemberera kwesimba remaruva mufananidzo. Ruva chinyorwa chakakurumbira chakanyorwa sehunhu mumabhuku echiChinese. Kupesana neruva rinoita seruva rakakurumbira, mifananidzo yeruva rinoora rinowanzobatanidzwa nejinx uye taboos. Iko kuunganidza inotarisa kuti chii chinogadzira maonero enharaunda pane icho chiri chinhu chakakura uye chakabiwa. Yakagadzirirwa 100cm kusvika 200cm kureba kwema tulle nguo, silkscreen kudhinda pane translucent mesh machira, iyo yekugadzira machira inobvumidza iyo prints kuti igare iri opaque uye yakatambanuka pane mesh, ichigadzira kutaridzika kwemaprints anotenderera mumhepo.
Chitatu 22 Zvita 2021
Rin'i Iyo yekugadzira inogashira kukurudziro kubva pamamiriro eArch zvivakwa uye muraraungu. Motifs maviri - chimiro che arch uye chimiro chekudonha, zvakabatanidzwa kugadzira fomu imwechete yakaenzana. Nekubatanidza mitsara midiki uye mafomu uye nekushandisa zvakapusa uye zvakajairwa motifs, mhedzisiro yacho iri nyore uye yakanakisa mhete yakaitwa yakashinga uye inotamba nekupa nzvimbo simba uye rwiyo kuyerera. Kubva pamakona akasiyana chimiro chechindori change - iyo yekudonha inowonekwa kubva kumberi angle, arch chimiro inotariswa kubva parutivi kona, uye muchinjikwa unoonekwa kubva kumusoro kona. Izvi zvinopa kukurudzira kuneiye anopfeka.
Aoxin Holiday Hotera China 20 Ndira
Superegg Kuisirwa Zvimwari Chitatu 19 Ndira
Bionyalux Ganda Rekuchengetedza Package Chipiri 18 Ndira
Tote Bhegi Pendant Womenswear Muunganidzi Mutsipa Nemhete Dzakaiswa Rakadhindwa Machira Rin'i